किन बारम्बार हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि ? के हुन् समाधानका उपाय ? « Everestleaks – Nepal's Popular Digital NewsPaper
२८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ००:००
तस्बिर : साउथ एसिया चेक
नेपाल आयल निगमले दुई साताभित्रै दुई पटक पेट्रोल, डिजेल लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । गत फागुन ४ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएकोमा १३ दिनपछि नै फागुन १७ गते मूल्यवृद्धि गरिएको थियो । फागुन ४ मा भएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा त्यसको भोलिपल्ट काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा रित्तो सिलिण्डर र थाल ठटाउँदै समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विरोध जनाएको थियो । यसैगरी फागुन १७ गतेको मूल्यवृद्धिको विरोधमा फागुन १९ गते संयुक्त विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा विधार्थीहरुले निगम अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । हवाई इन्धनको भाउ बढेसँगै नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघले विभिन्न गन्तव्यको हवाई भाडा बढाएको छ ।
लगातारको मूल्यवृद्धिले माघ ५ मा प्रति लिटर ११० रहेको पेट्रोल र ९३ रहेको डिजेलको मूल्य ६ रुपैयाँ बढेर हाल क्रमश: रु ११६ र रु ९९ पुगेको छ भने नयाँ मूल्य समायोजन बमोजिम मट्टितेल प्रति लिटर रु ९९ र खाना पकाउने ग्यास प्रति सिलिण्डर रु १४०० र हवाई इन्धन प्रति लिटर रु ७२ पुगेको छ ।
गत वर्ष मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको निगमले किन लगातार मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ?
के कारणले हुन्छ मूल्यवृद्धि ?
नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवम् इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । मुख्यत: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वत: मूल्यवृद्धि हुने गर्छ ।
कोभिड-१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको भाउ फेरि उकालो लाग्न थालेको छ । बिबिसिको एक रिपोर्टका अनुसार कच्चा तेलको मूल्य महामारी अघिको तहमा पुग्ने क्रममा छ । कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण इन्धनको माग नहुँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर परेको थियो । त्यतिबेला तेल कम्पनीहरुले बढी भएको आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्न ट्यांकर भाडामा लिएका थिए । त्यसले गर्दा अमेरिकामा इतिहासमै पहिलोपल्ट तेलको भाउ ऋणात्मक भएको बिबिसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा बारम्बर परिवर्तन हुनाले र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि भएको कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ ।
नेपालले भारतको इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गरेर मुलुकमा बिक्री वितरण गर्छ । त्यसैले नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आईओसीले तय गरेकै मूल्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसीको मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ । आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरुप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरुप मूल्य समायोजन गर्दछ ।
यी सँगसँगै नेपाल सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरुका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा मुख्य असर पर्ने गर्छ । सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो । यसैगरी नेपाल सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक नै प्रतिलिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ । यसबाहेक लिइने अन्य करहरु र अन्त शुल्कका कारण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि हुने गर्दछ ।
के कस्ता कर लगाइएका छन् पेट्रोलियम पदार्थमा ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर नरहने भएतापनि यसमा विभिन्न शिर्षकका करहरु तोकिएका छन् ।
चालू आव ०७७/७८ को बजेट अघि पेट्रोलमा १५.२० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा २–२ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क थियो भने बजेट मार्फत पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा थप प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको थियो । यो उच्च कर वृद्धि सँगै पेट्रोलको भन्सार शुल्क २५.२ रुपैयाँ भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको भन्सार शुल्क रु १२-१२ भएको छ ।
आव ०७२/७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर थपिएको थियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रति लिटर १०  रुपैयाँ लिने गरिन्छ । सरकारले सडक मर्मत-सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ र डिजेलमा २ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेलमा १.५० रुपैयाँ प्रदुषण शुल्क र पेट्रोलमा १.१० रुपैयाँ र डिजेलमा ०.९९ रुपैयाँ मूल्य स्थिरिकरण कोष अन्तर्गत कर लिने गरेको छ । “यस सँगसँगै विभिन्न शीर्षकमा करबापत सरकारले पेट्रोलमा कुल ५५.२३ रुपैयाँ कर र डिजेलमा ३७.९० रुपैयाँ कर असुली गरिरहेको छ,” नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले साउथ एसिया चेकलाई बताए ।
नेपाल सरकारले लागु गरेको कर बाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्च बापत १.७२ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा बापत ४.६४ रुपैयाँ र ४.४९ रुपैयाँ बिक्रेता खर्च जोड्ने गर्दछ । यसैगरी निगमले डिजेलमा १.४० रुपैयाँ निगमको खर्च, ३.४९ रुपैयाँ ढुवानी भाडा र ३.४३ रुपैयाँ बिक्रेता खर्च जोड्ने गरेको छ ।
विवरण पेट्रोल डिजेल
नेपाल सरकारको कुल कर ५५.२३ ३७.९०
ढुवानी भाडा ४.६७ ३.५२
बिक्रेता खर्च ४.५७ ३.५०
निगमको खर्च १.७८ १.४३
एक लिटरमा जोडिने कुल रकम ६६.२५ ४६.३५
जम्मा भएको करको अवस्था के छ ?
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट मार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर लगाइएको ५ रुपैयाँ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करबाट निगमले ५ वर्षमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करको शीर्षक परिवर्तन गरी सरकारले १३ फागुन ०७६ गते देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा थप ५ रुपैयाँ जोडेर कुल १० रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि निगमले मासिक २ अर्ब रुपैयाँ कर संकलन गर्न थालेको थियो ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन भन्दै थपिएको ५ रुपैयाँ कर उक्त आयोजनामा खर्च हुन सकेको छैन । परिवर्तित शीर्षकबाट उठेको कर पनि ठोस रुपमा कतै प्रयोग भएको छैन ।
यसैगरी सरकारले मूल्य स्थिरिकरण कोष शीर्षकमा लिँदै आएको करबाट हालसम्म कोषमा ११ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । मूल्य स्थिरिकरण कोषको प्रमुख काम भनेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरलाई न्युन गर्ने हो । तर हालसम्म उक्त कोषको रकम प्रयोग भएको छैन ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निगमबाट करबापत ६६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाएको थियो । भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा सरकारले उठाएको करहरु परिचालन गरी पुनर्मूल्यांकनको योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ । तर सरकारले त्यस्ताे कुनै योजना बनाएको छैन ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै किन अन्य वस्तुको भाउ बढ्छ ?
तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ । “तेलको भाउ बढेपछि सबै क्षेत्रको लागत मूल्य बढ्छ,” अर्थविद चन्द्रमणि अधिकारीले साउथ एसिया चेकलाई बताए । “हवाईजहाजको भाडा बढ्छ । बस, ट्रकको खर्च बढ्छ ।” ढुवानीको मूल्य बढेपछि वस्तु हेरी २० प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्ने उनको आँकलन छ । यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ । यसरी इन्धनको भाउ बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तुसमेत महँगो पर्नजाने उनको भनाइ छ । उनले भने, “यसले उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ । समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ ।”
के छन् समाधानका उपाय ?
पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोजिनुपर्ने अर्थविद अधिकारी बताउँछन् । “त्यसमा पनि इन्धनजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित हुँदैन । लागतको यतिभन्दा बढी कर नलगाउने, यतिमात्र कर लगाउने भन्ने सिद्धान्त अनुरुप हुनुपर्यो ।” त्यसैगरी निगमको व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाई व्यवस्थापन खर्चवापत रकम असुली हटाउने, अनावश्यक कर्मचारी हटाउनेजस्ता सुझाव अधिकारीले दिए । निगमले बारम्बार नेपालबाट भारतर्फ इन्धनको तस्करी भइरहेको बताउने गरेकाले त्यसलाई रोक्न सीमामा अनुगमन बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरिकरण कोष यतिबेला प्रयोग गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “नाफा भएको बेला राखेको पैसाबाट जनतालाई राहत दिनुपर्यो,” उनले भने, “त्यस्तै पूर्वाधार कर पनि प्रयोग गरिएको छैन । जनता अप्ठ्यारोमा छन् । त्यसलाई घटाउने वा हटाउने तर्फ सोच्नुपर्छ ।”
यो सामग्री southasiacheck.org बाट लिइएको हो ।
प्रकाशित : २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ००:००